1. Iqokobhe le-aluminiyam i-alloy die-casting, umphezulu we-electrostatically sprayed, kwaye inkangeleko intle;
2. I-radiator yoluliwe kwi-tensile aluminium alloy material ene-conductivity ephezulu ye-thermal kunye nefuthe elihle lokutshatyalaliswa kobushushu;
3. I-bracket yokuzikhethela okanye umkhono wokudibanisa isibane sesitalato unokukhethwa ukuhlangabezana neemfuno zokukhanyisa kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye kulula ukuyilungisa nokuphucula.
4. Uyilo lwesibane sesitalato luyilwe ngokweendlela ezimbini zendlela enkulu yesixeko, kunye nommandla omkhulu wokukhanyisa kunye nokukhanya okufanayo;
5. Isakhiwo esikwaziyo uqhushumbo kunye neembiza eziyintlanganisela ekwaziyo ukumelana nokudubula, ukusebenza okugqwesileyo kokumelana nokudubula kunye nokusebenza kombane;
6. Intsimbi engatyiwayo eveziweyo ifasteners enokumelana ne-corrosion ephezulu;
7. Isigqubuthelo esicacileyo seglasi, i-atomized anti-glare design, inokumelana nempembelelo yamandla aphezulu, ixhathise ukuxubana kobushushu, ukuhanjiswa kokukhanya ukuya kuthi ga kwi-90%;
8. Itekhnoloji yamandla eqhubela phambili, igalelo lombane obanzi, ngokuqhubekayo ngoku, ukukhuselwa kwesekethe evulekileyo, ukukhuselwa kombane omfutshane, ukukhuselwa kokunyuka kunye neminye imisebenzi;
9. Iimodyuli ezininzi ze-LED zamazwe ngamazwe, inkqubo yokusabalalisa i-optical yesibini eyenzelwe i-software ye-optical professional, iyunifomu kunye nokukhanya okuthambileyo, ukukhanya okukhanyayo ≥120lm / w, ukunikezelwa kombala ophezulu, ubomi obude, ukukhuselwa kokusingqongileyo;
10. Itekhnoloji yokutywinwa okuphezulu kokuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo kwexesha elide kwiindawo ezikhuselweyo eziphezulu kunye nezifumileyo;
11. Indlela yokulungelelanisa yesibiyeli eyilwe ngokukodwa elungelelanisa i-engile yokukhanyisa njengoko kuyimfuneko.
1. Khetha nganye nganye ngokwemigaqo kwintsingiselo yeenkcazo zemodeli, kwaye wongeze uphawu lobungqina bokudubula emva kwentsingiselo yenkcazo yemodeli.I-embodiment ethile yile: "imodeli yemveliso - ikhowudi yenkcazo + uphawu lobungqina bokuqhuma + ubuninzi bomyalelo".Umzekelo, isibane se-LED esingagqabhukiyo 100W, sifakwe isibiyeli, kunye neeseti ezingama-20 ziyafuneka.Inombolo yomzekelo yile: “Umzekelo: FCT93-Inkcazo: 100BFB+Ex d mb IIC T6 Gb+20.”
2. Jonga i-P431~P440 kwifom yofakelo ekhethiweyo kunye nezixhobo.
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1. Iqokobhe leAluminiyam yeAluminiyam yokuphosa, umphezulu wokutshiza we-electrostatic, imbonakalo entle.2. Uyilo olunelungelo elilodwa lomenzi wesakhiwo somngxuma omninzi, igumbi lonikezelo lwamandla, indawo yomthombo wokukhanya kunye nomngxuma wocingo ozimeleyo ozimeleyo kumngxuma ngamnye.3. Ukusetyenziswa kweglasi yeborosilicate ikhava ecacileyo okanye i-polycarbonate transparent cover, ukusebenza kobungqina bokudubula kunye nokusebenza kombane kunye nokuthembekileyo.4. Ukumelana ne-corrosion ephezulu yensimbi engenasici eveziweyo ye-fasteners.5. Ukhuseleko oluselubala...
Iimpawu zeMpembelelo yeModeli 1. I-enclosure yenziwe nge-alloy aluminium.Ibunjwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy okwexesha elinye, enamandla amakhulu, imisebenzi emihle yobungqina bokudubula.Umphandle wayo utshizwe ngeplastiki ngoxinzelelo oluphezulu lwe-static emva kokudutyulwa kuqhume ngesantya esiphezulu, esinobungqina bokurhwaphiliza kunye nenkangeleko entle.2. Isigqubuthelo seglasi esiqinileyo sinokugqithisela okukhulu.Izibophelelo zangaphandle zenziwe ngentsimbi engenasici.3. Kwindawo ebonakalayo, kukho umlawuli we-elektroniki ...
Iimpawu zeMpembelelo yoMfanekiso 1.Yenziwe nge-aluminium alloy kunye nobunzima obuphezulu.umphezulu ovuthuza isanti, unenkangeleko entle.2 .Isibane esikhethekileyo, ubomi obude, ukusetyenziswa okuphantsi, ukonga amandla kunye nokusebenza okuphezulu, ukukhanya kokuqokelela kuthambile (kungasetyenziselwa iingozi zendlela kunye nophando lolwaphulo-mthetho kwindawo yokufota , amanqaku, iminwe yeminwe, iifoto njl.), ukukhanya okukhanyayo, i-1200 ilumen, uluhlu lwendiza 600m, qhubeka ixesha lokusebenza 8hours, ukuba ukusebenza luminous flux 600 lumen, qhubeka workin...